Ukukhonza kukuThengisa okuTsha | Martech Zone
Ukukhonza kukuThengisa okuTsha
NgoMgqibelo, nge-15 kaFebruwari ngo-2014 NgoMgqibelo, nge-15 kaFebruwari ngo-2014 Itempile yaseLavon
Ndaya kwi I-Indianapolis AMA isidlo sasemini apho uJoel Book wathetha ngeNtengiso kuMandla oMnye. Inkcazo-ntetho yakhe iqulethe ulwazi oluninzi olujikeleze ukusebenzisa ukuthengisa kwidijithali ukukhonza abathengi ngokufanelekileyo. Nangona, bekukho izinto ezininzi zokuthabatha ezivela kwinkqubo, bekukho enye enamathele kum. Uluvo lokuba: ukukhonza kukuthengisa okutsha. Ngokusisiseko, umbono wokuba ukunceda umthengi kusebenza ngakumbi kunokuzama ukubathengisela.
Inokusebenza njani le nto kumaphulo akho okuthengisa nge-imeyile? Thumela ii-imeyile eziluncedo ezisebenza ngenjongo ethile kubaxhasi bakho. Nantsi imizekelo embalwa:
Izikhumbuzo zemveliso: ukuba kufanelekile kwimveliso yakho, thumela i-imeyile yesikhumbuzo kubathengi bakho xa besondele ekufuneni ukuphinda-odola okanye ukuthenga ukugcwaliswa.
Isikhumbuzo senqwelo yokuthenga eshiyekileyo: ngamanye amaxesha, abathengi babeka izinto kwinqwelo yabo ngenjongo yokuthenga, kodwa baphazanyiswe nje phambi kokuba bakwazi ukugqiba. I-imeyile yokulahla inqwelo yokuthenga inokuba yindlela ephucukileyo yokubakhumbuza ukuba kusekho izinto kwaye isenza kube lula kubathengi ukuba babuyele ngokukhawuleza kwaye bagqibezele ukuthenga kwabo.
Izikhumbuzo zoHlolo lweMveliso: Esi sisikhumbuzo esihle se-imeyile esiphumeleleyo sokuthumela kubathengi. Ngokuthumela, ukhumbuza abathengi bakho ukuba bagcwalise uphononongo kwimveliso abasandula kuyithenga. Nangona kunjalo, uphononongo lwemveliso elungileyo lunokunyusa ukuthembeka kwakho njengenkampani kwaye lunike abathengi bexesha elizayo ukuzithemba ngakumbi kwimveliso yakho.
Ukuba awuzange ukongeze ezi imeyile njengenxalenye yenkqubo yentengiso ye-imeyile, kutheni? Banokusetwa ukuba bathumele ngokuzenzekelayo ngokusekwe kukuziphatha kwabathengi kwaye bakhonze abathengi bakho ngokufanelekileyo, kunye nokuzisa ingeniso eyongezelelweyo kumgca wakho osezantsi. Kuvakala ngathi yi-slam dunk, akunjalo? Ukuba ufuna uncedo ekuphumezeni ezi ntlobo ze-imeyile kwinkqubo yakho ye-imeyile, nceda ufikelele eDelivra namhlanje.
Yeyiphi eminye imizekelo ye-imeyile onokuthi isebenzele abathengi?
tags: inqwelo yokuthenga eshiyiweyoemailemail Marketingizikhumbuzo imvelisoIvenkile
Ishedyuli: Ikhalenda yokuhlela kunye neNtlalontle yeWordPress
UStephen W. Anderson
Feb 17, 2014 ngo-7: 00 PM
Ukunceda abathengi bethu kunokuba lula okanye kunokuba ngumsebenzi, kuxhomekeke kwindlela w ekujonga ngayo. Ndihlala ndifumanisa ukuba ukunceda abathengi bam lishishini elinengeniso kakhulu. hayi ngokwengeniso kuphela, kodwa ngokwemali yentlalontle ngokunjalo.
Kwaye kwezi ntsuku, kunye nesixa sokushicilela amava amabi abathengi afika kumajelo eendaba ezentlalo, kuyavakala ngakumbi kunangaphambili ukukhonza abathengi bethu kakuhle. Awusoze wazi ukuba ngubani na okanye ngubani onokuba ngumjelo ongemva wokufumana umxhasi omtsha.